INDLU YAMAPHUPHO ( BAILLE an AISLING) - I-Airbnb
INDLU YAMAPHUPHO ( BAILLE an AISLING)
Seeleys Cove, New Brunswick, i-Canada
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Jason
U-Jason Ungumbungazi ovelele
Ikhaya leholide lomndeni elihlonyiswe ngokuphelele ngaphambili.
Itholakala ngokuphelele emphakathini omncane odobayo waseSeeleys Cove, ogwini lwaseFundy.
Zizwa ubuhle bemvelo nobumfihlo bendawo ngomfula kanye nempophoma, izilwane zasendle kanye nolwandle oluyimfihlo.
Imizuzu nje kude nezindawo zokudlela nezitolo, izimakethe, ama-artisan, izindlela zokuhamba izintaba, igalofu, amabhishi, amadrayivu asogwini kanye nohambo lokuzidela.
Ihora elilodwa ukusuka esikhumulweni sezindiza sase-Saint John nasemngceleni wase-U.S.
Amathambo omlando kanye nomlingiswa wekhaya lebhokisi likasawoti agcinwe ngothando futhi abuyiselwa ngakho konke ukubunjwa kwangempela, iminyango, izinkuni kanye nezitebhisi.
Umnyango oseceleni obheke ngasentshonalanga uvula kuvulandi ungene egumbini lokungena elikhanyayo elinesiteshi somsebenzi netafula.
Ekhishini, isiqandisi esisha, i-microwave, izinto ze-countertop, isitofu sikagesi, nosinki ophindwe kabili kwenza kube lula ukulungiselela ukudla nokuhlanza njengoba ujabulela ukubukwa kolwandle.
Umnyango wekhishi uvulelwa kuvulandi lapho iqoqo elinemisebenzi eminingi lefenisha yangaphandle lenza kube lula ukunikeza iziphuzo nokujabulela ukudla ngaphandle.
Igumbi lokuhlala/ lokudlela elikhulu liyakhanya ngisho noma inkungu igubuzele indlu, inefasitela elikhulu le-bay elibheke olwandle. Ifakwe impahla enethezekile kanye nosofa omusha ovulela umbhede onethezekile wezivakashi ezengeziwe noma labo abancamela ukungazihambeli ngezitebhisi.
Igumbi lokugezela elikhulu elibuyekeziwe elisezingeni eliphezulu/igumbi lokugezela elinguhhafu lengeza ekululameni kokuzijabulisa nokwamukela izivakashi zasebusuku.
Izitezi zangempela zikuyisa endaweni enkulu yokuhlala kanye namagumbi amathathu ezivakashi aphezulu.
Igumbi lokugezela elesimanjemanje lihlanganisa ubhavu/ishawa elinezinsimbi zokuphepha ezivikelekile nokunye ukubuka kolwandle.
Igumbi lokulala elikhulu (igumbi laseCanada) linefasitela elikhulu le-bay elinombono ongavinjelwe weBay of Fundy. Inombhede omusha wendlovukazi kanye nomatilasi; usinki wayo kanye nesitulo sengalo esithokomele sokufunda nokuphupha.
Igumbi le-Waterfall linemibhede engamaphosta ephindwe kabili nengubo enkulu efanayo, ngombono wehlathi nomfudlana.
Elinye igumbi lokulala elikhulu (eliqanjwe ngabazukulu bomnikazi ngokuthi Area 51) linombono wehlathi. Imibhede emibili (owodwa ubude obude), ingenziwa iNkosi, ngamalineni akhethwe ngokucophelela okukhethwa kukho ngakunye.
Wonke amagumbi okulala anekhabethe elikahle kanye nendawo yokugcina impahla, izindawo zokubeka imithwalo namathawula.
Isitezi esingaphansi sikakhonkolo esigcwele sifakwe iwasha nesomisi.
Izinsiza zangaphandle zifaka i-veranda enkulu ezinhlangothini ezimbili, kanye ne-BBQ ebangeni elifushane ukusuka endlini.
Umthombo osendaweni uhlinzeka ngokuhlinzekwa okungenamkhawulo kwamanzi ahlanzekile, anambithekayo.
4.90 · 29 okushiwo abanye
UJason... umphathi wakho kanye nomphathi wendawo ukhule futhi uhlala endaweni.Uqeqeshelwe ukuvakasha kwangaphandle, ezokuvakasha nokuzilibazisa, angakunikeza ulwazi mayelana nezinto ezihehayo zendawo njengamasiko nomlando, izinto ongazenza nezinto ongazibona.
Angatholakala yena ngokwakhe futhi ngombhalo noma ucingo ukuze aphendule noma yimiphi imibuzo onayo ngendlu noma indawo ezungezile.
UJason... umphathi wakho kanye nomphathi wendawo ukhule futhi uhlala endaweni.Uqeqeshelwe ukuvakasha kwangaphandle, ezokuvakasha nokuzilibazisa, angakunikeza ulwazi mayelana nezint…
UJason Ungumbungazi ovelele